थाईल्याण्डमा विकास हार्मोनको अनलाइन स्टोरको सम्बद्ध कार्यक्रम
हाम्रो सहबद्ध कार्यक्रम कसरी सामेल हुन सक्छ?
- पहिले तपाईंलाई आवश्यक छ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस र साझेदार खाता प्राप्त गर्नुहोस्
- दर्ता पछि, तपाईले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि एक विशेष कोड प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रत्येक बिक्री पछि, तपाईले तपाइँको कमीशनलाई ग्राहकसँग लेनदेनबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ
किन म साझेदार कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहन्छु?
- हाम्रो साथ वास्तविक पैसा बनाउनुहोस्!
- हाम्रो उत्पादनमा साझेदारहरूको लागि विशेष छूट पाउनुहोस्
- थोकमा पहुँच पाउनुहोस्
- अझै पनि सोच्नुहुन्छ? अहिले सामेल हुनुहोस!